Izimbadada Amabhishi Nezindawo Zokungcebeleka: Bhuka futhi uhambe ngokuzethemba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » I-Caribbean » Izimbadada Amabhishi Nezindawo Zokungcebeleka: Bhuka futhi uhambe ngokuzethemba
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • I-Caribbean • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Izindaba zaseSanta Lucia • Shopping • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Izimbadada Amabhishi nezindawo zokungcebeleka
AmaSandals Beaches and Resorts ajabule kakhulu ukuqhubeka nokwenza uhambo luphephe futhi lungabi nengcindezi ngangokunokwenzeka kuzivakashi ngokwandiswa koHlelo Lwalo Lokuvikela Ukukhanselwa kanye noHlelo Lokuvikelwa Kwezokuvakasha - Umshuwalense Usuvele kuthi ngoFebhuwari 28, 2021, ngenkathi futhi unikezela nge-COVID-19 yokuncoma ukuhlolwa kuzo zonke izivakashi ezibhalisiwe lapho zihlala khona ngaphambi kokuhamba kwazo. Ngalezi zinzuzo ezingeziwe, inkampani yezokuvakasha i-Luxury Included® inikeza amakhasimende izizathu ezingaphezulu kwalokho Bhuka ngokuzethemba.
"Sizoqhubeka nokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zethu ziba nokuthula kwengqondo uma kuziwa eholidini nathi eSandals naseBeaches Resorts," kusho u-Adam Stewart, uSihlalo oPhethe weSandals Resorts International.
Uhlelo Lokuvikelwa Kohambo - Umshuwalense Uphezu Kwethu
Ukunikeza izivakashi ukuvikeleka nangaphezulu, amaSandals® neBeaches® Resorts anwebise uhlelo lwawo lokuVikela oHambo - Umshuwalense Uphezu Kwethu onikwa amandla yiTrip Mate ™ ethengwa egameni lezivakashi. Lolu hlelo lunikeza abahambi ukubhuka manje ngoFebhuwari 28, 2021, ngokuhamba manje kuze kube ngu-Agasti 31, 2021, bandise izinzuzo zezokwelapha ngesikhathi sokuhlala kwabo. Ngohlelo Lokuvikelwa Kwezokuvakasha, izivakashi zimbozwa ukunwetshwa kokuhlala kwazo ukuze zihlukaniswe zodwa futhi zithole noma yikuphi ukwelashwa okudingekayo kuze kube ubusuku obungu-14 ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Izinzuzo ezingeziwe zohlelo zifaka ukumbozwa kwezindleko zezokwelapha kanye nezinzuzo eziphakeme ezifika ku- $ 100,000 isivakashi ngasinye.
Inzuzo Yokuvikela Ukukhansela *
Kusukela manje kuze kube nguFebhuwari 28, 2021, izivakashi ezibhukha i-Luxury Included® Vacation yokuhamba manje kuze kube ngu-Agasti 31, 2021, nazo zizoba nenzuzo eyengeziwe yokwazi ukuthi zingakhansela iholide lazo okungenani ezinsukwini ezingama-31 ngaphambi kokufika futhi zithole imbuyiselo ephelele ingxenye yomhlaba yeholide labo nezinhlawulo zero. Izivakashi ezikhansela izinsuku ezingama-30-15 ngaphambi kokufika zizothola inhlanganisela yokubuyiselwa imali kwamaphesenti angama-50 nesitifiketi sokuhamba esingamaphesenti angama-50 sokuhamba kwesikhathi esizayo kunoma iyiphi iSandals noma iBeaches Resort ezinyangeni eziyi-12. Abahambi banenketho yokukhansela ezinsukwini eziyi-14 kuze kufike usuku lokufika kwesitifiketi sokuhamba esivumeleke izinyanga eziyi-12 kusukela osukwini lokuqala lokuhamba.
* Le nzuzo inikezwa yi-Unique Vacations Inc. futhi akuyona inzuzo yomshwalense.
Ukuhlola okuncishisiwe kwe-COVID-19
Izindawo zokungcebeleka zezimbadada namabhishi zenza konke okusemandleni ukuhlinzeka ngesipiliyoni esiphephile, esingenamthungo nesingenakho ukucindezeleka ukuze izivakashi ziqhubeke nokubhuka iholide lazo elibizwa nge-Luxury Included® Vacation ngokuzethemba okuphelele. Izikhungo Zokulawulwa Kwezifo (CDC) zisanda kumemezela imfuneko yabahambi bamazwe omhlaba ukuletha isivivinyo esibi se-COVID-19 ngaphambi kokuba babuyele e-United States, Canada nase-UK. Ngenxa yalezi zidingo, zonke izivakashi zeSandals kanye namaBeach Resorts zizothola ukuhlolwa kwe-antigen okuncomekayo kwe-COVID-19 yezakhamizi zase-US kanye nokuhlolwa kwe-PCR kwabahlali baseCanada nabase-UK zisuka nje endaweni yokuhlala. Zonke izivivinyo zizoqhutshwa ochwepheshe bezokwelapha abagunyaziwe becabanga ngokusebenziseka kahle kwezivakashi kanye nokuphazamiseka okuncane kulwazi lwabo lonke lweholide. Uma ukuhlolwa kwesivakashi kutholakala nge-COVID-19 ngaphambi kokuhamba kwabo, izindawo zokungcebeleka zigcwaliswa ngokugcwele ngeziteshi zezokwelapha ezisebenza nsuku zonke nomhlengikazi obhalisiwe kanye nabasebenzi bezokwelapha abangaba ngu-24/7.
Umhlomulo Wokuvikelwa Kokukhanselwa, uHlelo Lokuvikelwa Kohambo kanye nokuhlolwa okuncomekayo kwe-COVID-19, kanye ne- Izimbadada zePlatinum Protocol zokuhlanzeka futhi Amabhishi Amaprothokholi Wenhlanzeko, ivumela abahambi ukuba babalekele eCaribbean ngokuthembela abakulindele.
Ngeminye imininingwane yokuthi ungabhuka kanjani futhi uhambe ngokuzethemba, vakashela:
Ukuze ufunde kabanzi ngoHlelo Lokuvikelwa Kwezokuvakasha - Umshuwalense Uphezu Kwethu, vakashela:
Sikhuluma Ngokuphathelene Ezweni Elisha Lokuhamba
Ama-60% abantu baseMelika mancane amathuba okuba bahambe ngamaholide